Ohere di-onu Ozo maka Organic & NPK Compound Fatịlaịza Granules Ihicha Suppliers na Factory | YiZheng
Gịnị bụ Okpokoro Okpomoku?
Na Igwe ikuku na-ekpo ọkụ eji mmanụ ọkụ na-ere ọkụ ozugbo, na-etolite ọkụ ọkụ site na ọgwụgwọ dị elu dị elu, ma kpọtụrụ ihe maka ikpo ọkụ na ihicha ma ọ bụ mmiri. Ọ ghọọla ngwaahịa nnọchi nke isi iyi ọkụ eletrik yana ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Kedu ihe eji eji ọkụ-ikuku eji eme ihe?
The mmanụ ụgbọala oriri nke Igwe ikuku na-ekpo ọkụ bụ ihe dị ka ọkara nke iji uzuoku ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-enweghị isi. Ya mere, a na-eji ikuku dị ọcha na-ekpo ọkụ dị elu nwere ike iji mee ihe n'emeghị ka ngwaahịa ngwaahịa a mịrị amị.
Enwere ike ịkekọrịta mmanụ n'ime:
1 Mmanụ siri ike, dị ka kol na coke.
Fuel Mmanụ mmiri, dị ka mmanụ dizel, mmanụ dị arọ, mmanụ a alcoholụrụma
Fuel Mmanụ gas, dị ka gas, gas na mmiri mmiri.
Ikuku na-ekpo ọkụ nke ikuku mmanụ ọkụ na-eme na kọntaktị n'èzí ma jikọta ya na ọnọdụ okpomọkụ ụfọdụ, wee banye n'ime igwe akọrọ ozugbo, yabụ ikuku ikuku agwakọta jupụtara na kọntaktị fatịlaịza iji buru mmiri ahụ. Iji jiri ọkụ ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ, a ga-arụkọ ọrụ mmanụ ọkụ ọkụ niile, dịka: ndị na-ere ọkụ ọkụ, ndị na-ere mmanụ, ndị na-ere gas, wdg.
Kpụrụ Ọrụ nke Ọkụ Na-ekpo ọkụ
Na usoro ihicha na usoro granulation mmiri, ikpo ọkụ ikuku dị ọkụ bụ ihe ndị metụtara ya dị mkpa, nke na-enye isi iyi ọkụ dị mkpa maka sistemụ draya. Usoro nke gas / mmanụ ọkụ ikuku ọkụ nwere atụmatụ nke okpomọkụ dị elu, nrụgide dị ala, njikwa ọnọdụ ziri ezi na iji ọkụ ọkụ eme ihe. A na-edozi ikuku na-ekpo ọkụ na ọdụ nke nnukwu ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ iji melite arụmọrụ nke Igwe ikuku na-ekpo ọkụ. Igwe a na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-agbatị elu dị elu karịa na-adabere na ngụkọta nke usoro siri ike iji hụ na ọkụ ọkụ ọkụ na-ebu ọkụ na arụmọrụ ọkụ dị elu.Igwe ikuku na-ekpo ọkụ.
Atụmatụ nke Hot-air stovu
Ule nke Igwe ikuku na-ekpo ọkụ site na ngwakọta fatịlaịza na-egosi na ebe a na-ekpo ọkụ buru ibu ma olu ọkụ ọkụ ahụ zuru oke, nke na-ebelata oke ọdịiche dị n'etiti isi na ọdụ nke rotary otu cylinder ihicha igwe, nke mere na enwere ike ịchịkwa mmiri nke fatịlaịza ngwongwo n'ime oke akọwapụtara. Eziokwu ahụ gosipụtara na ijiIgwe ikuku na-ekpo ọkụ enweghị ike ọ bụ naanị ijikwa mmiri nke granulu mgbe ihichachara, kamakwa dozie nnukwu nsogbu nke fatịlaịza fatịlaịza, ma n'otu oge belata ojiji nke ndị na-egbochi ndị na-eri nri iji belata ọnụahịa mmepụta.
Hot-ikuku stovu Video Display
Nhọrọ Nlereanya Na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Kwes arụmọrụ （%）
Azụ ọkụ (kg / h)
Ike Oriri （kw / h）
Onyinye ikuku (m3 / h)
Nke gara aga: Rotary Fatịlaịza mkpuchi igwe
Osote: Highlọ ọrụ okpomọkụ dị elu arụ ọrụ Fan Fan